इस्मा गाउँपालिकाको वडा नं. १ मा एमालेको निर्वाचन परिचालन कमिटि गठन – Gulmiews
इस्मा गाउँपालिकाको वडा नं. १ मा एमालेको निर्वाचन परिचालन कमिटि गठन
४ चैत्र २०७३, शुक्रबार १६:४७ राजु गौतम
गुल्मी चैत ४ । आगामी बैशाख ३१ गते हुने निर्वाचनलाई मध्यनजर राखेर बिभिन्न पार्टीले निर्वाचन मुखि कार्याक्रमहरु गर्न थालेका छन् । स्थानिय निर्वाचनलाई मध्य नजर राखेर नेकपा एमाले इस्मा गाउँ पालिका वडा नम्बर १ को छल्दी टारा स्याला रातचौर सामाचौरको निर्वाचन परिचालन कमिटी गठन गरेको छ ।
शुक्रवार छल्दीमा सम्पन्न वडा भेलाले दान बहादुर जिसी को संयोजकत्वमा ५५ सदस्यीय निर्वाचन परिचालन कमिटी गठन गरेको छ । निर्वाचन परिचालन कमिटिीले आगामी निर्वाचनको लागी टोलटोलमा नेकपा एमालेको अभियान सञ्चालन गर्ने जनाको छ । कार्यक्रममा इस्मागाउँ पालिका निर्वाचन परिचालन कमिटी उपसचिव टीका रेस्मी र सचिवालय सदस्य राम मल्ल ठकुरीको बिशेष उपस्थिति रहेकोे थियो ।